कोरोनाभाइरसको नयाँ नश्ल र महामारीको भविष्य - HongKong Khabar
कोरोनाभाइरसको नयाँ नश्ल र महामारीको भविष्य
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ २६, २०७७ समय: १३:५८:३३
कोभिड खोपको वितरण जति सुस्त भयो उति कोरोना भाइरसको म्युटेसनले नयाँ नयाँ स्वरूप जन्माउदै जाने संभावना सघन भएर गइरहेको देखिन्छ । भाइरसको ब्राजिल , साउथ अफ्रिका र बेलायत संस्करणले रोग निरोधक प्रणालीलाई छ्लेर उम्कन सफल भएपछि कतै यिनले मानिसमा पुन संक्रमणको दोस्रो कोभिड महामारी ल्याउने होइन भन्ने डर पैदा गरिदिएको छ।
लाग्छ कोभिड – १९ ले आफ्नो परिक्रमालाई पूरा गरेर पहिलाको प्रस्थान बिन्दुमा नै आइपुगेको छ र हामी पनि पुन कोभिडसंग प्रथमतः लड्न शुरु गर्दा जहाँ थियौ तेहि पुगेकाछौ। तर राम्रो के छ भने संभावित पुन संक्रमणसंग जुध्ने हतियार प्रभावकारी सुइ छ हामीसंग जुन एक वर्ष अघि थिएन।
फाइजर र मोडेर्नाको खोप अमेरिकामा डिसेम्बर २०२० देखि नै चालू भैसकेको छ। नोभाभ्याक्स र जोन्सन एन्ड जोन्सनले निर्माण गरेको खोपले पनि राम्रो क्षमता देखाइरहेछ।
अस्ट्राजेनेका भ्याक्सिनको प्रारम्भिक अध्यनले कोरोना पोजेटिभ भएका ६७% मानिसलाई निको पारेको देखाएको छ। अहिलेको संगिन घडीमा भ्याक्सिन मार्फत संक्रमणलाई रोक्न सक्नु नै ठुलो कुरा हो जसले गर्दा कोरोना भाइरसको म्युटेसनले मौलाउने आधार भुमि पाउदैन । फलस्वरूप महामारीको अन्तलाइ देख्न सकिन्छ ।
कोरोना भाइरसको पहिलो पुनसंक्रमण रिपोर्ट अगस्ट (SN.८/२४/२०) महिनामा आएको थियोे ।
कोरोना भाइरसको नयाँ म्युटेसन र यसले ल्याउने पुनसंक्रमणको संभावना , भ्याक्सिन र महामारी गरिएको समसामयिक वार्ता यहाँ प्रस्तुत छ। युनिभर्सिटी अफ मिचिगनका महामारीविद औब्री गोर्डनसंग गरिएको यो वार्ता साइन्सन्युजबाट साभार गरिएको हो।
प्रश्न : अगस्टमा भएको प्रहिलो पुन संक्रमणबाट अहिलेसम्ममा हामीले के सिक्यौँ ?
गोर्डन : हामीलाई थाहा छ पुन संक्रमण हुन्छ भन्ने कुरा। तर त्यो भन्दा उता हामीलाई थाहाछैन। यसबारेमा थुप्रै अध्यन भैरहेकाछ्न, पुनसंक्रमणका रिपोर्टहरु पनि आएकाछ्न , तर यसले कतिको आम रुप लिइरहेको छ हामीलाई थाहा छैन । यो महामारीलाई थेगेको भर्खर एक वर्ष कटेकाले पुन संक्रमणको स्वरूपलाई हेर्नै बाकी छ।
प्रश्न : पुन संक्रमण किन हुने गर्दछ?
गोर्डन: पुनः संक्रमण धेरै कारणले हुने गर्दछ। सामान्यतया कुनै पनि मानिसमा भाइरसलाई रोक्ने यथेष्ट रोग प्रतिरोधक सामर्थ्य नहुनाले यस्तो हुने गर्दछ।
प्रथम चोटि इन्फेक्सन भएको बेला बलियो तरिकाले भाइरसलाई टक्कर नदिएका कारण दोस्रो चोटि तेहि भाइरसले पुन इन्फेक्सन गराउदछ। अथवा अर्को अवस्था भनेको शरीरले बलियो तवरले भाइरसलाई सामना गरेको पनि हुन सक्छ तर समयको अन्तरालमा शरीरको रक्षात्मक प्रणालीमा क्षय आएका कारण पुन संक्रमण भएको हुन सक्छ।
पुन संक्रमण हुने अर्को अवस्था भनेको भाइरसले रुप परिवर्तन गरेमा हो। भाइरसले रुप परिवर्तन गरेमा शरीरको एन्टिबडिले त्यसलाई अथवा भाइरसको केही निश्चित एरियालाई चिन्दैन र पुन संक्रमण हुने गर्दछ। बिशेषत: सार्स- कोभ-२ को मामिलामा यस्तो किसिमको रुप परिवर्तन यसको स्पाइक प्रोटिनमा हुन सक्छ।भाइरसले यही स्पाइक प्रोटिनलाई भाला बनाएर हाम्रो सेल भित्र छिर्दछ।
फ्लु भाइरसको मामलामा पनि अक्सर यस्तै हुने गर्दछ। भाइरसले रुप बदली रहन्छ। यसरी रुप बदलेर आए पछि हाम्रो शरीरले त्यसलाई चिन्दैन र पुन संक्रमण हुने गर्दछ।
प्रश्न : पुन संक्रमणको सम्बन्धमा भाइरसको नयाँ प्रजातिको भुमिका चाहिँ के छ?
गोर्डन : जति पनि पुन संक्रमणका रिपोर्टहरु आइरहेका छ्न त्यसमा हाम्रो ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। तर यसले कतिको आम रुप लिइरहेकोछ त्यो कुरामा यसको जोखिम निर्भर पर्दछ।
के पुन संक्रमित हुनेहरु भाइरसको नयाँ प्रजातीबाट सुरक्षित रहन सक्दैनन् त? पक्कै पनि मामला त्यस्तो होइन।
पहिला नै कोभिडले भेटेकाहरुलाइ पुरानै भाइरस भन्दा नयाँ भाइरसबा पुन संक्रमण हुने संभावना उच्च रहन्छ मेरो विचारमा ।
हामीलाई अझै अनुमान छैन यो पुनसंक्रमण कतिको विकराल बन्छ । शोधकहरुले पुन संक्रमणको गम्भीरतम केसलाई आइसवर्गको सानो प्रकट अंश मात्र मानेकाछ्न तर यसैले नै के हुदैछ भन्ने कुराको पुर्ण नक्शा दिदैन।
प्रश्न : यदि भ्याक्सिनले संक्रमणलाई सुस्त तुल्याउदछ भने यो कसरी सहयोगी सिद्ध हुन्छ ?
गोर्डोन: हामीसंग अब अर्को अस्ट्राजेनेका भ्याक्सिन पनि थपिन्दैछ जसले भ्याक्सिन वितरण प्रक्रियालाई थप द्रुत तुल्याउदछ। र यदि भ्याक्सिनले संक्रमणलाइ घटायो भने त्यो पनि राम्रो कुरा हो। किनकि जति कम केस भयो त्यति भाइरसले म्युटेसन हुने मौका कम पाउंछ।
प्रश्न : हर्ड इम्युनिटी (सामुहिक प्रतिरोधक क्षमता ) र भ्याक्सिन भन्नाले के बुझिन्छ ?
गोर्डन: भाइरसको नयाँ प्रजातीलाई सामना गर्ने इम्युनिटी नभएका जमातमा रिइन्फेक्सनको रेट उच्च हुन गयो भने हर्ड इम्युनिटी हासिल गर्न ज्यादै कठिन हुन्छ।
” हे भगवान ! के यो महामारीको अन्त हुन्न अब? के अब हामीले यसरी नै सधैं भरी बाँच्नु पर्ने हो? ” अहिले धेरैले यस्तै प्रश्न गर्छन् । तर यो अवस्थाबाट छुटकारा पाइन्छ।
भाइरसको नयाँ प्रजातीहरुको जति धेरै बाहुल्यता रहदै जान्छ उति धेरै पुन संक्रमण हुने क्रम बढेर जान्छ।
मुल भाइरसलाई परास्त गर्ने इम्युनिटी हामीमा भएता पनि भाइरसको नयाँ संस्करणका कारण संक्रमण जारी रहन सक्छ। तर पुन संक्रमणको लक्षण कस्तो हुन्छ खुट्याउन जरुरी छ।
केही ल्याब तथ्यांकको अध्यनलाई हेर्दा भ्याक्सिनले समेत भाइरसको नयाँ स्वरुपलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको देखिन्छ ।
भ्याक्सिन कम्पनीहरु अहिले भ्याक्सिन बुस्टर अथवा दोस्रो भ्याक्सिन बनाउन तिर लागि सकेकाछ्न। अब बनिने भ्याक्सिन भनेको दुई आयामिक (bivalent) भ्याक्सिन नै हो जसमा मुल भाइरस र यसको नयाँ संस्करणलाई निष्क्रिय पार्ने क्षमता हुदछ।
प्रश्न : तेसो भए यो महामारीको अन्त कहिले हुन्छ?
गोर्डन: भाइरसका नयाँ प्रजातीहरु बढेका कारण अझै केही समय लाग्न सक्छ। तथापि सबै महामारीको अन्त निश्चित छ।
अनुवाद: क्रान्ति सुब्बा